Ehe, kushandisa Kutaridzika se Calculator ndiyo yakanakisa uye inomhanyisa mu macOS | Ndinobva mac
Kunyangwe isu takatarisana neimwe yesarudzo idzo dzatinadzo mu macOS kwenguva yakareba, kune vashandisi vakati wandei vanotibvunza Ndeapi macalculator atiri kushandisa paMac yedu? kuita iwo chaiwo masvomhu mashandiro.
Mhinduro kumubvunzo iri nyore kwazvo, isu tinoshandisa kutarisa kwayo uye inoshanda zvakakwana kwatiri. Chaizvoizvo ndeyangu uye yevashandisi vazhinji iyo yakanakisa uye inokurumidza sarudzo inowanikwa pane Mac kuita chero kuverenga, zvese usingashandise Mac Calculator kana kuisa yechitatu-bato kunyorera.
Izvo zviri nyore senge zvinoshanda kuita macalculator chero nguva uye pakubata kwekhibhodi pfupi. Isu tese tatoziva maitiro ekuwana iko kutarisa kuri kuburikidza ne cmd kiyi + space bar kana nekudzvanya pagirazi rinokudza iyo inowanikwa mune kurudyi menyu bar yeMac yedu .Kana tangova nemwenje wakavhurika, zviri nyore sekutaipa mashandiro atinoda kuita tichishandisa khibhodi yedu zviratidzo zvinodiwa (+ - * /) kuita mashandiro.
Tinogona kuverenga mhando dzese dzekushanda uchishandisa iyi sarudzo, kunyangwe yakaoma kwazvo.
Unogona kunyatsotora mukana weSpotlight bar uye ndosaka tichifanira kuraira mashandisiro ayo mune aya mamiriro atinofanira kukurumidza kune chimwe chikonzero kana chimwe. Tingave tisina kujairwa kuita iyi mhando yekuverenga nayo pakutanga, asi kana tangove tasimbiswa nezviratidzo uye zvichingodaro, inoshanda zvakanyanya pane kuvhura karukureta uye kudzvanya rimwe nerimwe neMagic Mouse kana Trackpad iyo nhamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Ehe, kushandisa Kutaridzika se Calculator ndiyo yakanakisa uye inokurumidza pane macOS